Ẹsụk ẹbọp obufa ufọk ye ọfis
site ha na 06-05-2020
Sichuan XiangYue Ike akara mmiri Cop. (XY Tower) hiwere 2008. Na mbọ nke niile stof, ụlọ ọrụ amalite nnọọ ngwa ngwa. Ahịa anyị na-ọtụtụ ebe si anụ ụlọ na esenidụt, ọtụtụ puku elu na-nyefere ndị ahịa na etinyere China, Sudan na ọtụtụ ndị ọzọ ...
Onye isi ndị otu mpaghara lelee ụlọ ọrụ mmepụta ihe
site ha na 12-03-2020
XY Tower dị ka a na-eduga enterprise anyị district, na district isi attaches dị ukwuu na-achọ nlezianya mmepụta management & mmepụta ikike & gburugburu ebe obibi nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe. N'ozuzu, ọ ga-akpọbata ndị otu ya na XY Tower maka mmụọ nsọ ...
site ha na 09-11-2019
N'ihi COVID-19, ndị ahịa anyị enweghị ike ịbịa n'ụlọ ọrụ anyị maka nyocha ụlọ elu. Na November 9, tupu anyị ebute, anyị mere mgbakọ ụlọ elu ahụ. A ga-ahazi ụdị ụlọ elu ọ bụla mgbakọ. a ga-eziga ngwugwu ihe ọ bụla maka ndị ahịa na 5% mo ...
Emechara oru nke ZuoGong County nke oma
site ha na 16-12-2018
Obodo ZuoGong dị na ChangDu City, Tibet. ZuoGong bụ otu n'ime mpaghara kachasị daa ogbenye na China niile. Isi ọrụ nke oru a bụ idozi nsogbu ike nke mmadụ 9,435 nọ na ezinaụlọ 1,715 na obodo nchịkwa iri atọ na atọ na Bitu Township nke ZuoGong ...
Nnyocha otu nke steeti gird nleta ụlọ ọrụ
site ha na 16-07-2018
State Grid bụkwa ndị ahịa anyị kachasị mkpa. Kwa afọ, ụlọ ọrụ anyị na-enweta ihe karịrị 15 nde USD si State Grid ma were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 80% ahịa ahịa nke ụlọ ọrụ anyị. Steeti Grid Corporation nke China (State Grid) bụ ụlọ ọrụ nke steeti (SOE) guzobere na 2002 n'okpuru ...
China rụrụ ọrụ izizi nke ụwa na eriri nnyefe 1,100-kv DC
site ha na 06-11-2017
HEFEI - Ndị ọrụ China rụchara ọrụ ntanetị na ntanetị ntanetị 1,100-kv ugbu a na obodo Lu'an na mpaghara Anhui nke East China, nke bụ ikpe mbụ na ụwa. Ọrụ ahụ bịara mgbe a d ...
Hazie ndị ọrụ niile ka ha rụọ ọkụ ọkụ
site ha na 23-08-2017
Ngwaahịa a na-ebuga na Myanmar
site ha na 06-04-2017
XYTower meriri nkwekọrịta site na Myanmar afọ a ma anyị meriri mbufe na ọnwa a. ASEAN bụ otu n'ime ndị mmekọ China kachasị mkpa. XY Tower bara uru nke ahia ASEAN nke ukwuu. Na oria ojoo, busi ...